Imijukujuku yemijukujelwa, izinto ezilahlwayo zonyango, Izinto ezingasetyenziswanga ezilahlwayo- iJPS
iiglavu zovavanyo ze-nitrile
Ingubo ye CPE
Izixhobo zonyango ezisisiseko
umqulu wephepha lesofa
Uluhlu lokuvala inzala
I-Microporous Coverall ngeTape enamathelayo
Ezilahlwayo iimpahla-3 zihamba ngaphandle ephothiweyo fa fa ...
3 Ply Non Woven Crivilian Face Mask kunye ne-Earloop
Iiglavu zovavanyo lweLatex
Iziqhano zilahlwe Powder Free
Ezilahlwayo Blue Vinyl Iziqhano Powder Free
Ezilahlwayo Suti yokuHamba
Isinxibo seSMS esiqhelekileyo
Ii-Drapes ezingenazintsholongwane ezingenanto ngaphandle kweTape
Ezilahlwayo Ezinyangiweyo zoNyango oluPhezulu
Banokulahlwa Pack Cesarean
Isisombululo esinye sokumisa
Sinikezela ngemveliso yokhuselo ukusuka entloko ukuya ezinzwaneni
Ingcali kunye nokuGxila
Ngamava eminyaka engama-20 + yokuthumela ngaphandle izinto ezilahlwayo zonyango
Ithembekile kwaye izinzile
Gxila kokubini kwintengiso yangaphambili nasemva kwenkonzo yokuthengisa
Ukusetyenziswa kweMihla ngemihla ngeMithi yoMqhaphu womthi ngeeNkqubo ezininzi zeGciwane kwiintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane
Iimpawu Nceda uqaphele ukuba ezinye izixhobo azifakwanga. I-100% esemgangathweni yabemi abasebenzayo: Imveliso ngokubanzi yeMveliso: Ukwaziswa kweMveliso yeCotton: Yenziwe ngeenkumbi zendalo, ukuthamba okuthambileyo, unyango lobushushu obuphezulu, ucoceko kunye nococeko. - Kukhethwe phezulu ...
Ukuvuza okulahlayo ngokunyibilikayo kwengubo yokuziva ethambileyo yokuziva unamandla
Inkcazo ethambileyo, yomoya, enamandla (anti-ukuvuza) amandla okubhengezwa, ukwahlula uthuli kunye neentsholongwane, kuthintela isikhafu kunye neenwele eziwayo. Khetha ulwelo olunje ngotywala, igazi, ioyile, amanzi. Ithambile, igudile kwaye intofontofo isetyenziswa ngokubanzi kwezonyango, ukuqhubekeka kokutya ...
Isakhiwo seqela leJPS eHangzhou
Iindleko zezabelo Shanghai JPS Medical Co., Ltd. eyasekwa ngo-2010, ngumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi wezikhuselo, iintsholongwane kunye nezisombululo zenzalo kunye neemveliso.
Izatifikethi zethu ze-ISO13485 kunye ne-CE zokutya ezingaphezulu kwama-60 ezikhutshwe yi-TUV yaseJamani.
Sineqela elinamava le-R & D, iqela leQC kunye neqela lenkonzo.
Iimveliso zethu ziye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-80 kunye nemimandla kuquka kwimarike Chinese zasekhaya.
1. Yomelele kwi-R & D: sinokuvelisa kwaye sinikeze iimveliso ezenziwe ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zomthengi.
2.Umgangatho onokuthenjwa: silandela ngokungqongqo iimfuno ze-ISO13485. Iqela lethu le-QC linamava eminyaka engama-20 ekuveliseni nasekuboneleleni ngokukhusela, ukubulala iintsholongwane, izisombululo zenzalo kunye neemveliso.
3. Ixabiso elifanelekileyo: ngenxa yobungakanani bethu obukhulu, ikowuteshini yethu ihlala ikhuphisana kakhulu.
Ukuhanjiswa okukhawulezayo: sihlala sigcina iimveliso eziqhelekileyo ezifanelekileyo ukunciphisa ixesha lokuhambisa.
5. Izatifikethi zethu ze-ISO13485 kunye ne-CE ezingaphezu kwezi-60 zonyango ezisetyenziswayo ezikhutshwe yi-TUV yaseJamani, ezinokukhawulelana neemfuno zonikezelo lweethenda zikaRhulumente.
C1506, No. 519, Qifan Rd, Pudong, Shanghai, China. Ngo-200137